Andriamanitra dia tsy manana na inona na inona manohitra anao - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > fohy fisainana > Tsy misy Andriamanitra aminao
Tahaka izany ve ny fibebahana kristiana? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ny fomba maro hanatsarana fivoarana ara-moraly? Kristianina maro no manana fironana hino fa ny fahamasinana dia mitovy amin’ny tsy misy ota. Na dia tsy diso tanteraka aza izany dia misy lesoka lehibe iray amin'io fomba fijery io. Ny fahamasinana dia tsy hoe tsy misy na inona na inona, izay fahotana. Fahamasinana ny fisian'ny zavatra lehibe kokoa, dia ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azo atao ny manasa ny fahotantsika rehetra, ary na dia mahomby aza isika (ary izany dia "raha" lehibe satria tsy nisy olon-kafa afa-tsy i Jesosy no nanao izany), dia mbola tsy tonga amin'ny tena izy isika fiainana kristianina.